युनिक नेपालद्वारा निर्मित वर्दियाको नयाँ गाउँमा जगनठ्या मर्वाको उद्घाटन - Hamar Pahura
शुक्रबार, जेठ २८, २०७८ १७:४०:०५
बर्दिया, जेठ २८ गते । थारु समुदायको धार्मिकस्थल तथा देउथान जगनठ्या मर्वाको शुक्रबार यहाँ उद्घाटन गरिएको छ । राजापुर नगरपालिका २ मा पर्ने नयाँगाउँको जगनठ्या मर्वाको उद्घाटन युनिक नेपालका संस्थापक संरक्षक तथा पूर्वमन्त्री डा. गोपाल दहितले गर्नुभयो ।
पूर्वमन्त्री डा. दहितले जनप्रतिनिधिहरुले अन्य समुदायको धार्मिकस्थल निर्माणका लागि लाखौं बजेट छुट्याए पनि आफ्नै समुदायको ठन्ह्वा निर्माणका लागि ध्यान दिन नसकेको बताउनुभयो । नयाँगाउँ सबैभन्दा पुरानो थारु वस्ती भएको चर्चा गर्नुहुँदै यहाँको मर्वा फुसको र अस्थायी भएकाले स्थायी रुपमा मर्वा निर्माणमा सहयोग गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
थारु समुदायको धार्मिक आस्थाकोरुपमा रहेको पवित्र स्थल मर्वाको स्थायी स्थलका लागि युनिक नेपालले काम गर्न थालेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसअघि पनि युनिक नेपालले बिभिन्न स्थानहरुमा थारु ठन्वाको निर्माण गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । समुदायको मागअनुसार युनिक नेपालले ठन्वा निर्माणमा सहयोग गर्ने युनिक नेपालका अध्यक्ष प्रिमबहादुर थारुले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा कुलापानी चौधरीले मर्वा निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएकाले सम्पूर्ण घरधुरीको तर्फबाट धन्यवाद दिनुभयो । कार्यक्रम नयागाउँका बरघर रामकरण थारुको अध्यक्षतामा भएको थियो । सो कार्यक्रमको संचालन युनिक नेपालका कार्यक्रम अधिकृत सोम डेमनडौराले गर्नुभएको थियो ।